PIXEL'S UNKNOWN BATTLE GROUND 1.42.01 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.42.01 လြန္ခဲ့ေသာ6ရက္က
ဂိမ္းမ်ား အက္ရွင္ PIXEL'S UNKNOWN BATTLE GROUND
PIXEL'S UNKNOWN BATTLE GROUND ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သငျသညျစစ်ရေး blocky pixel ဂိမ်းနဲ့တူပါသလား ပိတ်ပင်တားဆီးမှုမွို့၌ကမ္ဘာပျက်ပြီးနောက်အရူး pixel စစ်တိုက်နယ်ပယ်တွင်ပေါ်ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါ! သေလွန်သောသူတို့သည်ကျွန်းပေါ်ရှင်သန်မှုရဟတ်ယာဉ်ထဲကဤနေရာသို့သွားရန်အကောင်းဆုံးပြန်ပေးလော့တွေ့ပါက, ရန်သူများကိုအနိုင်ရ။ ဒါပေမဲ့ အဆိုပါကျုံ့ဇုန်မကြောက်ပါကသိသိသာသာထိခိုက်ပျက်စီးမှုမ! AK, pixel သေနတ်, smg, မျိုးစုံ-စည်နှင့်အခြားလက်နက်များနှင့်အတူရိုက်ကူး။ နောက်ဆုံးတည်းသောအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ BE!
သင့်ကိုယ်ပိုင် pixel ပိတ်ပင်တားဆီးမှုဇာတ်လမ်းလုပ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 3D သေနတ်သမားအတွက် deathmatch ၏အဆုံးအဘို့အ Fight!
အရေခွံပဲစစ်မှန်တဲ့ 3D ပိတ်ပင်တားဆီးမှုမြို့ရှင်သန်မှုဂိမ်းထဲမှာလိုပဲလုံးဝစုံလင်သောကြည့်ရှု, သင်သည်မည်သည့် pixel ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအရေခွံယ်ယူနိုင်ပါသည်,
✪အားနည်းဖုန်းများများအတွက် ဂရစ်ဖစ် settings ကို
ကျွန်ုပ်တို့၏ pixel ကို full HD ဂရပ်ဖစ်တွေနဲ့သေနတ်သမားများနှင့်သင်တို့ကိုလည်းအားနည်းဖုန်းကိုရှိပါကသင်သည်အနိမ့် setting ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်;
✪လက်နက်များ 30 ကျော်အမျိုးအစားများကို
ထိုကဲ့သို့သော AK, ဒါပေါ်မှာ minigun, လက်ဖြောင့်သေနတ်, pixel သေနတ်, smg, ပစ္စတိုနှင့်အမျှကြီးမားသောစစ်ရေးလက်နက်တိုက်။ ကမ္ဘာ၏အဆုံး Start ရုံ pixle သေနတ်နှင့်အတူအညွန့်,
၏သင်တန်းကျနော်တို့စစ်တိုက်ကားများသို့မဟုတ်တိုက်ခိုက်ရေးယာဉ်များရှိသည်နှင့်ပင်ကျွန်တော်တစ်ဦး Tank ရှိသည်! ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျယ်ပြန့် pixel ကမ္ဘာကြီးနှင့်အတူအခှငျ့အရေးနေဖို့! သင့်ရဲ့ဘလောက်အင်အားစုကတတ်နိုင်သမျှအစာရှောင်အပ်သေဇုန်ထဲကနေကိုယ့်ကိုယ်ဖုံးကွယ်!
သင်တို့ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးရုံ pixel တိုက်ခိုက်ရေးနှင့်ကျားကန်အမဲလိုက်ခြင်းသည်ရိုက်ချက် button ကိုတွန်းအားပေးရန်မလိုအပ်ပါ။ ကျနော်တို့ချည်းနှီးသောဘုန်းက၎င်း၏သင့်အကြောင်း, မည်သူမဆိုမနှမြောပါဘူးမမျှော်လင့်ထားပါ!
ဂရန်းမြေပုံအရွယ်အစား, ထိုကြောင့်တောင်များနှင့်သေလွန်သောသူတို့သည်ဇုန်ကဝိုင်းရဲ့, ငါတို့ရှိတယျ။ Big ဓါတ်ရောင်ခြည်ကျွန်းကဒီသင်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုမွို့၌ plaiyng စဉ်ရှင်သန်ရန်ရှိသည်ရာအရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ multiplayer အွန်လိုင်းသေနတ်သမားအတွက်တူညီတဲ့မြေပုံကျော် 20 အထက်ကစားသမားများရှိသည်!
ရုံလည်ပတ်! သင် pixel သေနတ်သမားကစားနေစဉ်နာရီနှင့် dayz အားဖြင့်ပျံသန်းပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုသတိထားမိမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ pixel စစ်ပွဲဂိမ်းနှင့်သင်၏တိုက်ပွဲများကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာသငျသညျရနျသူသနှင့်အတူထွက်တွက်ဆသို့မဟုတ်သင် pixel ၌သေကြလိမ့်မည်။
pixel ကမ္ဘာကြီးနှင့်အတူအကောင်းဆုံးရှင်သန်ရပ်တည်ရေးဂိမ်းတစ်ခုမှာ။ စစ်တိုက် Royale အွန်လိုင်းသေနတ်သမားသင်ပျင်းရမသွားပါစေလိမ့်မည်!
ကျွန်ုပ်တို့၏ multiplayer ဂိမ်း download ပြုလုပ်လုံးဝအခမဲ့အွန်လိုင်းဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ROYAL စစ်တိုက်ရာတွင် PIXEL Warfare ပြီးသားစတင်ရှိသည်!
pixel Facebook ကအုပ်စုတစု: https://www.facebook.com/BattleGround-Royale-1965237837083264/
PIXEL'S UNKNOWN BATTLE GROUND အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
PIXEL'S UNKNOWN BATTLE GROUND အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
PIXEL'S UNKNOWN BATTLE GROUND အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
PIXEL'S UNKNOWN BATTLE GROUND အား အခ်က္ျပပါ
dwiko-lukito စတိုး 157.26k 61.5M
PIXEL'S UNKNOWN BATTLE GROUND ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း PIXEL'S UNKNOWN BATTLE GROUND အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.42.01
ထုတ်လုပ်သူ Azur Interactive Games Limited
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://docs.google.com/document/d/1SKtw7QgX2nqzd5BfAF15IfZFN_ntvVaH9r0C1iSeNl4/edit
Release date: 2019-06-19 09:32:37
လက်မှတ် SHA1: C4:DA:A6:2E:47:59:50:6A:D5:42:9B:C3:8A:22:87:64:20:67:76:18
အဖွဲ့အစည်း (O): Azur Games
PIXEL'S UNKNOWN BATTLE GROUND APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ